နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလုံခြုံရေးအလင်း၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Led Flight Lights၊ တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သော Outdoor Security Lights များကိုကမ်းလှမ်းပါ
Jiangmen Biaosheng Solar Energy Technology Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Organization , Service အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Middle East , Worldwide ထုတ်ကုန်:91% - 100% Cert:ISO14001, ISO9001, CB, CE, RoHS ဖေါ်ပြချက်:နေရောင်ခြည်လုံခြုံရေးအလင်း,နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Led ရေကြီးမှုအလင်းများ,အဆောက်အ ဦး အပြင်နေရောင်ခြည်လုံခြုံရေးအလင်းများ,300W နေရောင်ခြည်သုံးအလင်းများ,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီး > 300W နေရောင်ခြည်သုံးအလင်းများ
300W နေရောင်ခြည်သုံးအလင်းများ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, နေရောင်ခြည်လုံခြုံရေးအလင်း, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Led ရေကြီးမှုအလင်းများ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အဆောက်အ ဦး အပြင်နေရောင်ခြည်လုံခြုံရေးအလင်းများ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ 300W နေရောင်ခြည်အစက်အပြောက်အလင်း
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစွမ်းအင်သုံး ဦး ဆောင်ရေလွှမ်းမိုးမီး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး LED မီးအလင်းရောင်ဘက်ထရီ
၁။ အတောက်ပဆုံးနေရောင်ခြည်သုံးမီးအလင်းများ - အပြင်ဘက်တွင်နေရောင်ခြည်သုံးမီးထွန်းခြင်း ၃၉၀၀၀ မီတာကျော်ရှိသည့်သိုလှောင်ထားသည့်ကြီးမားသောသိုလှောင်ထားသည့်ဘက်ထရီသည်350ရိယာ ၃၅၀ စတုရန်းမီတာကျော်ကိုထွန်းလင်းပေးနိုင်သည်။ ၂။ Remote Control - အဝေးထိန်းခလုတ်များရှိသည်။ မီတာ (၈) လုံးတွင် multi mode၊ bright full mode၊ half bright, ၃...
၁။ တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း ၃။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအလင်းရောင်အားနည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ the နံရံတွင်နံရံအလင်း၊ ကားဂိုဒေါင်အလင်း / ဥယျာဉ်အလင်းအဖြစ်ဖော်ပြခြင်း၊ law မြက်ခင်းအလင်း၊ ရှုခင်းအလင်း / ဆိုင်းဘုတ်များကဲ့သို့မြေပြင်အတက်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ atio တိုင်အားအလင်း၊ ရေကူးကန်မီး၊ ၂။ IP65...
Supply နိုင်ခြင်း: 1000000000PCS/Month
· ၃၀၀W နေရောင်ခြည်သုံးမီးအိမ် အင်္ဂါရပ်များ: ·ထည့်သွင်းထားသော photoelectric sensor၊ Auto-On / Off မှညမှအရုဏ်သို့ရောက်ပါသည် ·တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူ၊ ရေစိုခံ၊ ဖုန်မှုန့်နှင့်ကြာရှည်ခံ ·လေထုညစ်ညမ်းမှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ခြင်းများမရှိပါ ·မြှုပ်ထားသောလီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ၊...
၁။ များစွာသောလုပ်ဆောင်ချက် - အိမ်အပြင်ဘက်ရှိနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးများ - Adjustable Timing Function - ၃ နာရီ၊ ၆ နာရီ (သို့) ၈ နာရီပင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဝေးလံခေါင်ဖျားထိန်းချုပ်မှုဖြင့်သင်၏ဆိုလာစွမ်းအင်သုံးရေကြီးမှုကိုလွယ်ကူစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ၂။ ကြိုးမဲ့နှင့်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ခြင်း -...
min ။ အမိန့်: 200 Carton
အင်္ဂါရပ်များ: ၁။ တင်သွင်းထားသောမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော LED Chip 150mm / w တောက်ပသော LED Chip သည်သက်တမ်းရှည်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ LED Module ထောင့်ကိုညှိနှိုင်း။ -15 ° ~ + 15 °နိမ့်သောအလင်းရောင်, IP67 နှင့်ညှိသည်။ ချိန်ညှိနိုင်သောထောင့်သည်အကောင်းဆုံး illumination effect ကိုအာမခံပေးသည် ၂။...
ထုပ်ပိုး: V-MAX တံဆိပ်ထုပ်ပိုး
min ။ အမိန့်: 500 Bag/Bags
ရှင်းလင်းသော power level ၏ညွှန်ပြချက်သည်သင့်အားမီးအိမ်၏ power level ကိုခြေရာခံနိုင်ပြီးစွမ်းအင်ပြတ်တောက်သွားမည်ကိုမစိုးရိမ်ပါနှင့်။ 【လုပ်ငန်းခွင်ကြာရှည်စွာ66V / 30W ဆိုလာပြားများတပ်ဆင်ထားပြီးအကောင်းဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးနှင့် ၃.၂V / ၂၅၀၀၀ mAh စွမ်းရည်မြင့် Lithium သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီတပ်ဆင်ထားသည်။...
၁ ။ SMART DESIGN - နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအပြင်ဘက်တွင်လုံခြုံရေးအစက်အပြောက်မီးများသည် Intelligent time switch control ဖြစ်သည်။ အလင်းရောင်သည်မှောင်မိုက်တွင်အလိုအလျောက်စတင်သည်။ အလင်းရောင်အရောင်ကိုအချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုတွင်အလိုအလျောက်ထုတ်ပေးသည်။ 2. IP65 ရေစိုခံနိုင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းနှစ်နည်း：...
【ကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အချိန် trees နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးအလင်းရောင်ခြည်ရှာဖွေစက် / သစ်ပင်များအတွက်နေရောင်ခြည်ဖြာခြင်းအလင်းရောင် / အံ့သြဖွယ်ရာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအလင်းရောင် ၆V / ၃၀W နှင့် ၃.၂ / ၂၅၀၀၀ mAh စွမ်းအားမြင့်လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီပါဝင်သည်။ P သည်နေ့အချိန်တွင်အားအပြည့်သွင်းပြီးနောက် ၁၂ မှ ၁၈...
min ။ အမိန့်: 100 Carton
၁။ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ရန်သော့ခလောက်နှစ်ခု။ ၁၆.၄ ပေအရှည်ရှိသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဝါယာကြိုး၊ ရေထွန်းပါ ၀ င်သော LED ၃၀၄ ခု၊ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုစလုံးအတွက်ကျောဘက်တွင် ၂ ခုလုံးကိုနံရံတပ်ဆင်ထားခြင်းသို့မဟုတ်မြေပြင်တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။ လူသွားလမ်း၊ လယ်ယာမြေ၊ လမ်းကြောင်း၊ ဥယျာဉ်၊ 2. Multiple Control: IR remote remote control...
၁။ Super Bright: နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းမီးများ ၂၀၀၀၀၀၀ mah ကျော်ရှိသောကြီးမားသောသိုလှောင်ထားသည့်သိုလှောင်ထားသည့်ပမာဏသည်31ရိယာအား ၃၁၅၀ စတုရန်းပေကျော်ထွန်းလင်းပေးနိုင်သည် ၂။ လုပ်ငန်းခွင်ကြာရှည်: ၅V / ၂၀ ၀ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆိုလာပြားနှင့် ၃.၂V / 20000mAh...
၁။ တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း ၃။ နေရောင်ခြည်အလင်းကိုနည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ wall နံရံတွင်နံရံအလင်း၊ ကားဂိုဒေါင်အလင်း / ဥယျာဉ်အလင်းအဖြစ်ဖော်ပြခြင်း။ law မြက်ခင်းအလင်း / ရှုခင်းအလင်း / ဆိုင်းဘုတ်များကဲ့သို့မြေပြင်အတက်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ atio တိုင်ပေါ်တွင်အလင်း / ရေကန်မီး၊ ကားလမ်းအလင်းအဖြစ်တိုင်ပေါ်တွင်တင်ထားသည် 2....
၁။ Super Brightness： အပြင်ဘက်တွင်နေရောင်ခြည်သုံးအလင်းရောင်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးမြင့်မားသောတောက်ပသော LED ပေါင်းစပ်ထားသောအရင်းအမြစ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၁၂၀ ဒီဂရီရောင်ခြည်ထောင့်များဖြင့်ဥယျာဉ်၊ ကားဂိုဒေါင်၊ မြက်ခင်းပြင်၊ ရေကန်၊ ခြံစည်းရိုး၊ ။ ၂။ Remote Control Multi Working Modes： Manual Control Mode -...
၁။ High Brightness W 300W နေရောင်ခြည်သုံးစွမ်းအင်သုံး ၃၀၄ သည် ၁၄၀၀ lumen light ကိုအလင်းရောင်ပေးသည်။ ၄၀၀ မှ ၅ ယူနစ်သည်ဘတ်စကက်ဘောကစားကွင်းကိုထွန်းလင်းစေပြီး ၁၁ လုံးယူနစ်သည်ဘောလုံးကွင်းတစ်ဝက်ကိုလင်းစေနိုင်သည်။ ၂။ RF Remote Control & Dusk to Dawn solar ဤနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးအလင်းရောင်သည် RF နှင့်အဝေးထိန်းအကွာအဝေး...
၁။ 1000LM SUPER BRIGHT- ၂၀၀WW အလင်းရောင်မြင့်မားသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအလင်းရောင်သည်စတုရန်းမီတာ ၂၀၀ အထိအလင်းရောင်ကိုထောက်ပံ့သည်။ ၃ မှ ၄ ယူနစ်သည်ဘတ်စကတ်ဘောကစားကွင်းကိုထွန်းလင်းစေသည်၊ ၉ ယူနစ်သည်ဘောလုံးကွင်းတစ်ဝက်ကိုထွန်းလင်းစေသည်။ ၂။ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း။ လျှပ်စစ်ကုန်ကျမှုမရှိပါ။ ၃။ Remote Control - အဝေးပြေးလမ်းမကြီး...
၁။ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း - နှစ်ခုကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ တစ်ခုမှာချိတ်ဆွဲထားသည်။ တစ်ခုမှာ screw နှစ်ခုဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ အထုပ်တွင်ပါ ၀ င်သော 4pcs screw နှစ်ခုပါရှိသည်။ ထို့ပြင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအလင်းရောင်နှင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးကြိုးကိုဆက်သွယ်ရန်အတွက် ၅ မီတာကေဘယ်ကြိုးတပ်ဆင်ထားသည်။ 2. IP6５ ရေစိုခံ -...
·【 Long ကအလုပ်အဖွဲ့အချိန်】 5V / 25W နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကိုနှင့် built-in 3.2V / 10000mAh မြင့်မားတဲ့စွမ်းရည်လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီတပ်ဆင်ထားပြီးအဆိုပါနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးရေလွှမ်းမိုးအလင်းအိမ်။ ၎င်းသည်နေ့အချိန်တွင်အားပြည့်ပြီးနောက် ၁၂ မှ ၁၈ နာရီအထိမွန်းတည့်ချိန်မှအရုဏ်အထိစဉ်ဆက်မပြတ်ပေးသည်။ မှတ်ချက်။ ။...
တရုတ်နိုင်ငံ 300W နေရောင်ခြည်သုံးအလင်းများ ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် 300W နေရောင်ခြည်သုံးအလင်းများ အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ နေရောင်ခြည်လုံခြုံရေးအလင်း,နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Led ရေကြီးမှုအလင်းများ,အဆောက်အ ဦး အပြင်နေရောင်ခြည်လုံခြုံရေးအလင်းများ,300W နေရောင်ခြည်သုံးအလင်းများ,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် 300W နေရောင်ခြည်သုံးအလင်းများ ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ 300W နေရောင်ခြည်သုံးအလင်းများ အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် နေရောင်ခြည်လုံခြုံရေးအလင်း,နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Led ရေကြီးမှုအလင်းများ,အဆောက်အ ဦး အပြင်နေရောင်ခြည်လုံခြုံရေးအလင်းများ,300W နေရောင်ခြည်သုံးအလင်းများ,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ 300W နေရောင်ခြည်သုံးအလင်းများ အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
အဆောက်အ ဦး အပြင်နေရောင်ခြည်လုံခြုံရေးအလင်းများ